Manchester United oo heshay warar aad u xun, kahor bilaabashada isbuuca FIFA – Gool FM
(Manchester) 20 Maarso 2018. Manchester United ayaa heshay warar aad u xun ee ku aadan dhaawacyada dhowr ciyaartoy ka tirsan safkeeda, kahor bilaabashada isbuuca FIFA, inta aysan ku biirin xulalkooda.
Ciyaaryahanka kaliya ee ka dhaawacmay tan iyo isbuucii lasoo dhaafay ayaa wuxuu ahaa Romelu Lukaku, lakiin ma ahan xidiga kaliya ee ka dhaawacan xiligan Red Devils, kadib markii ay dhaawacyo kala duwan ay la kulmeen dhowr ciyaartoy kale, xiliga ugu adag ee xili ciyaareedka.
Xidigaha Luke Shaw iyo Anthony Martial ayaa looga reebay sababa la xiriira dhaawac liiska xulalkooda England iyo France, sidoo kale ilaa iyo haatan waxaa la shaki galinayaa inay ku biiraan xulalkooda xidigaha Nemanja Matić iyo Marcus Rashford.
Si kastaba Manchester United ayaa laga badiyay labo kulan ee isku xigta kahor bilaabashada isbuuca FIFA, iyadoo kulankeedii ugu dambeeyay ay ciyaartay looga cirib tiray tartanka FA Cup.
Sidaasi darteed Red Devils-ka ayaa haatan looga fadhiyaa inay sameyso soo laabasho cajiib ah kulmada soo aadan ay ka ciyaari doonto tartamada kala duwan.